Drum kululeeyaha, silikoon kululeeyaha, kaydadka kululeeyaha, ningax jaakadaha - Pamaens
Tashiil tamarta, halkan bilaabi
Taageerada email beth@pamaens.com
Taageerada Call +86 021-34125536
Jaakada ningax for Band kululeeyaha (kululeeyaha jaakada)
Jaakada ningax for tannuurka iyo haanta nuclear-
Jaakada ningax for Madax & Dhuumaha & Flange
Jaakadaha ningax kartoo
Energy Saving kululeeyaha
Energy Saving Nano kululeeyaha
Energy Saving Induction kululeeyaha
Drum Haanta Kulayliyaha
Kartoo jaakada kululaynta / buste
kululeeyaha caag silikoon
kululeeyaha silikoon la koollo
Dhoobada Band Heate
Miikaa Band kululeeyaha
Tuur Band kululeeyaha
Tuur aluminium kululeeyaha band
Tuur naxaas kululeeyaha band
Kululaynta & Qaboojinta System
saxan kululaynta dhoobada
Tuur saxan kululaynta
Carbon Fiber kululeeyaha
Kululeeyaha Ceramic infrared
J nooca thermocouple
K nooca Thermocouple
nooca Pin thermocouple
Kululaynta & ningax xal, adiga uun
Shanghai PAMAENS TECHNOLOGY CO., LTD takhasusay R & D, wax soo saarka iyo iibinta kululaynta iyo waxyaabaha madhxiya tamarta lagu badbaadinayo. PAMAENS bixisaa rakibo, tababar iyo adeeg one-stop-iib aheyn ka dib. PAMAENS uu noqday hoggaamiyaha berrinkii codsigaaga technology warshadaha tamarta lagu badbaadinayo kululaynta ee Shiinaha iyo dibadda.
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid yihiin jaakadaha ningax, taangiga iyo durbaanka kululeeyayaasha, kululeeyayaasha infrared, kululeeyayaasha kaydadka, kululeeyayaasha gariiradda, kululeeyayaasha embriyaha, kululeeyaha band dhoobada, Miikaa kululeeyaha band, tuuray-in kululeeyaha, hawada la qaboojiyey kululeeyaha iyo biyo la qaboojiyey kululeeyayaasha band iwm
PAMAENS heleen shahaadooyin ISO9001 CE iyo RoHS. Waxay khusaysaa baaritaan adag iyo gacan ku haynta qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha iyo sidoo kale tallaabo processing kasta. badeecada waxaa loo iibiyey in Europe, America, Bariga Dhexe, South Eastern Asian, Australia, Japan, Russia iwm
PAMAENS uu leeyahay nidaamka tayada adag on qayblibaaxna wax, processing warshadaha, iyo baaritaanka waxyaabaha. Waxaan ku adkaysanayaan on isticmaalaya qalab ceeriin tayo sare leh oo aan baadho dhammaan qalabka aan u isticmaali doono.
PAMAENS Our shirkadda, ayaa ISO 9001, shahaadooyinka CE iyo shahaadooyinka RoHs inta badan waxyaabaha our.
Our shirkadda, PAMAENS, ma aha oo kaliya soo saare, Annagu waxaannu nahay naqshadeeye iyo sameeysa. Waxaan bilaabi bixiyaan xal kululaynta for warshadaha habka caag ah tan iyo 2005, iyo 2012, waxaan bilaabi bixiyaan xal keydinta tamarta tamar sare gubaya warshadaha caag ah.